ပြည့်စုံ: February 2008
Pyae Sone | 11:30 AM | poem | ကဗျာ
အနာဂတ်အတွက် ငါ ခဏဝေးနေခဲ့ပါတာ
ဒီအချိန် မြက်ခင်းပြင်အပြည့် နင်ကြွေနေပြီ
သည်ကဗျာသည် ကျနော်တခါမှမရောက်ဘူးသော လွမ်းမောဖွယ်ရာ မောရှမ်းပြည်ကို ချယ်ရီပန်းဖြင့် စိတ်ကူးပုံဖော်ထားပါသည်။ အဘယ့်ကြောင်ဆိုသော် ကျနော့်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ZHC သူကအခုစင်္ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေသော သူငယ်ချင်းက သူအရမ်းသတိရတဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် ကဗျာတပုဒ်စပ်ဆိုပေးပါဆိုလို့.. စပ်ဆိုပေးရတဲ့အတွက် အမှားအယွင်း အလွဲအချော် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည် ဒါပေမယ့် ဖြည့်ပြီးခံစားပေးပါ…. ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူအရမ်းခံစားနေရတယ်… ချယ်ရီပင်နဲ့ဝေး… တောင်ပြာတန်းနဲ့ဝေး အားလုံးရဲ့အဝေးမှာ ……. သူ့လိုပဲ ဖြေသိမ့်မရ ဝေဒနာတွေအားလုံးမှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိကြမယ်ဆိုတာ… ကျနော်နားလည်ပါတယ်.. ကျနော်လည်းထို့အတူ ထပ်တူခံစားရတယ်…
စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများလည်း ခံစားရမယ်ဆိုရင် ကျနော်သိခွင့်ရှိမလား…. ထပ်တူလား….. သို့မဟုတ်… ထို့ထက်ပိုလား…. သို့မဟုတ် ……..
အချိန် - 11:30 AM
Pyae Sone | 7:52 AM | poem | ကဗျာ
တဂွီဂွီ မြည်နေတဲ့ အစာအိမ်
အချိန် - 7:52 AM
Pyae Sone | 10:59 PM | poem | ကဗျာ
မြူနှင်းမှုန်ပြပြ တစ တစနဲ့
သေခါနီး လူပြောခံရအောင် လုပ်နေတဲ့
လရောင်နဲ့ ဝေး .... ..... ဝေးသွား
အချိန် - 10:59 PM
Pyae Sone | 12:47 AM | poem | ကဗျာ
ယုံကြည်ချက်တွေကို နာကြည်းမှုတွေနဲ့ မျိုသိပ်ခဲ့ရ။
အချိန် - 12:47 AM
Pyae Sone | 8:50 PM | Statement
အချိန် - 8:50 PM
Pyae Sone | 9:20 AM | ဆောင်းပါး
အချိန် - 9:20 AM
Pyae Sone | 8:14 AM | Statement
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)အမေရိကားဌာနခွဲများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလူငယ်များကွန်ကရက် တို့၏ (၆၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Pyae Sone | 2:11 AM | Statement | ဆောင်းပါး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)၏သဘောထားနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Pyae Sone | 7:09 AM | Statement
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဒုတိယအကြိမ် ဗဟိုကော်မတီ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကြီး၏ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းအပါအ၀င် ခိုင်မာကျယ်ပြန့်သော နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဒုတိယအကြိမ် ဗဟိုကော်မတီ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
အချိန် - 7:09 AM
Pyae Sone | 7:33 AM | ကဗျာ
ပြည်သူလူထု ရွံရှာ မုန်းတီးတဲ့အစိုးရ၊
ပြည်သူလူထုက ချီးမွှမ်းတဲ့ အစိုးရ၊
ပြည်သူလူထုက ရှိမှန်းတောင်မသိတဲ့ အစိုးရတဲ့၊
အချိန် - 7:33 AM
Pyae Sone | 7:30 AM | အီးမေးပို့စာ
ဘလော့ဂ်ဂါမောင်နှမတွေအကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ စနောက်ကြရင်း "မြို့စားကြီးနေဘုန်းလတ်" လို့ နာမည်တွင်ခဲ့တဲ့သူ။ မနှစ်က ဒီလိုနေ့မှာပဲ "လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်" ဘလော့ဂ်လေးကို သူကိုယ်တိုင် အသက်သွင်းခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ တော့ တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်သွားပြီပေါ့။ မှတ်မှတ်ရရ သူ့ ဘလော့ဂ်မှာ ပထမဆုံးတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်နာမည်ကလည်း "လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်"တဲ့။
လက်တွေ့ဘဝမှာ သူလွတ်ကျခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဒါမှမဟုတ် အနုပညာသမားဆိုတဲ့ အမည်နာမတွေအတွက် သူ့ ဘလော့ဂ်ဟာ သစ္စာရှိတဲ့ လူယုံ၊ အစွမ်းထက်တဲ့ လက်နက်၊ အရိပ်ကောင်းတဲ့ ညောင်သစ်ပင်လို အသုံးတော်ခံခဲ့တယ်။ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ရက်အတွင်းမှာ သူ့ မြို့တော်က စာကောင်းစာသန့် ၁၂၂ ပုဒ်မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီစာတွေကြောင့် ဖတ်သူတွေအတွက် သုတပန်းတွေလန်းလာခဲ့တယ် ၊ ရသလမ်းတွေ ဆန်းလာခဲ့တယ် ၊ ပညာမီးတွေ လင်းပလာခဲ့တယ် ။ သူကတော့ သတိထားမိချင်မှ ထားမိလိမ့်မယ်။
ဘလော့ဂ်ဂါတွေ အတွက် ပထမဆုံးဆိုတဲ့ စကားလုံးတော်တော်များများမှာ သူနဲ့လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေကို ပထမဆုံး ပုံနှိပ်မယ့်စာအုပ်အတွက် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ သူအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ စာအုပ်ကိစ္စ ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းကိုမပျက်မကွက်တက်ရောက်ခဲ့သူဟာလည်း သူ တစ်ဦးတည်း ရှိခဲ့တယ်။ နောက်ပြီးရန်ကုန်မှာ ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ Blog Day Seminar အတွက်လည်း သူပါဝင်ခဲ့တယ်။ MRTV4 နဲ့ အခြားသော မီဒီယာတွေအကြားမှာ ဘလော့ဂ်လောကအကြောင်းကို သူချပြရဲခဲ့တယ်။ ဝေဖန်မှုတွေကို လက်ခံခဲ့တယ်။ မေးခွန်းတွေကိုအပြုံးနဲ့ ဖြေကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ သူ့ရင်နဲ့ တည်ထားတဲ့ မြို့တော်ကြီး တစ်နှစ်ပြည့်တယ်။ ခုလိုအချိန်မှာ သူသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားခွင့်ရမယ်ဆိုရင် သူ့ဘလော့ဂ်အတွက် အထိမ်းအမှတ်ပို့စ်တင်မယ့် အစီအစဉ်ရှိမယ်ဆိုတာ အသေအချာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ … ဘယ်မှာလဲ ။ သူရေးမယ့် ပို့စ်မှာ Comment ရေးဖို့ ဘလောဂါ့ရပ်ဝန်းက သူငယ်ချင်းတွေ သူ့ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်တကြီး စောင့်နေကြတယ်။ "မြို့စားကြီး" လို့ စနောက်ကြဖို့ စောင့်နေကြတယ် … ဇန်နဝါရီ ၂၉ ကတည်းက ခြောက်သွေ့နေခဲ့ရတဲ့ သူ့ မြို့တော်မှာ အပြုံးတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေစေချင်တာ … ရယ်သံတွေနဲ့ စည်ညံနေစေချင်တာ … ဒါတွေအတွက် အားလုံးက စောင့်မျှော်နေဆဲပါ ..။
ဘလော့ဂ်ဂါတွေကို ချစ်ကြည်စေချင်တဲ့ သူ့အတွက်၊ လူငယ်တွေကို ကောင်းစေချင်တဲ့ သူ့ အတွက်၊ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ သူ့ အတွက်ဘေးဒုက္ခဆိုတာ မြူတစ်မှုန်စာတောင် ကျရောက်မလာစေဖို့ ဘလောဂါ့ရပ်ဝန်းမှ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးက ဒီအမှတ်တရ ပို့စ်လေးနဲ့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
(ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုတာအခက်အခဲကြောင့် အချိန်မီမတင်ဖြစ်တာကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ )
ပေးဆပ်ခဲ့သော ပေးဆပ်နေဆဲဖြစ်သော သူရဲကောင်းများအာဇာနည်များကို ဦးညွှတ်လျှက်..
အချိန် - 7:30 AM
Pyae Sone | 11:14 AM | Photos | poem | ကဗျာ
.... .... ..... ..... .... ။
“ ဆ၀ါဒီ ခပ်” မှာအားနည်းသွားခဲ့ကြ..။
မြန်မာ စကားတွေ အသံတွေ
.... ...... ..... ..... ”
အော် .... ဆုတောင်းမှားခဲ့ကြလို့လား....။
အချိန် - 11:14 AM